सलमानले दिए पत्नी र १७ वर्षकी छोरीलाई दुबईमा लुकाएको आरोपबारे यस्तो जवाफ ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
सलमानले दिए पत्नी र १७ वर्षकी छोरीलाई दुबईमा लुकाएको आरोपबारे यस्तो जवाफ !
पछिल्लो समयमा अभिनेता सलमान खानसामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको शिकार बनेका छन् ।
उनले पत्नी र १७ वर्षकी छोरीलाई दुबईमा लुकाएको हल्ला फैलिएको थियो । सलमानले भर्खरैमात्र आफ्ना भाई अरबाज खानको टक शो ‘पिन्च टु’ टुमा यस्तो आरोपबारे खुलेर जवाफ दिएका छन् ।
बलिउडको टोली चलचित्र छायाङ्कनको तयारीका लागि मनाङमा
कोभिड-१९ र गत असार १ मा आएको बाढीपहिराका कारण आवतजावत ठप्प रहेको हिमाली जिल्ला मनाङमा